गुगलले हार्‍याे बिर्सन पाउने हकको मुद्दा « News24 : Premium News Channel
गुगलले हार्‍याे बिर्सन पाउने हकको मुद्दा
प्रकाशित मिति : Apr 16, 2018
काठमाडौँ । बिर्सन पाउने हकका खातिर गुगलविरुद्ध बेलायतका उच्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेका एक व्यवसायीले मुद्दा जितेका छन् ।
मुद्दासँग सम्बन्धित संवेदनशीलताका कारण नाम गोप्य राखिएका ती व्यक्तिले गुगल सर्चबाट आफ्नो विगतका आपराधिक गतिविधिहरुका सामग्री हटाउन माग गर्दै मुद्दा हालेका थिए ।
शुक्रबार यस मुद्दामा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मार्क वार्बीले ती व्यक्तिको पक्षमा फैसला सुनाएका हुन् । तर यस्तैखाले मागदाबी गरेका अर्का एक व्यवसायीले भने मुद्दा हारेका छन् । उनले विगतमा गरेको अपराध जघन्य प्रकृतिको भएको हुँदा त्यसलाई गुगल सर्चको नतिजामा लुकाउन नमिल्ने ठहर उनको छ ।
गुगलविरुद्धको मुद्दा जितेका व्यवसायीले दश वर्षअघि सञ्चार अवरुद्ध पार्न खोजेको अभियोगमा पक्राउ परी जेल समेत बसेका थिए ।जबकी मुद्दा हार्ने व्यवसायीले चाहिँ बैंक खाताको झुटो विवरण सम्बन्धी मुद्दामा ४ वर्षको जेल सजाय भोगेका थिए ।
ती व्यवसायीहरुको बारेमा गुगलमा सर्च गर्दा उनीहरुका विगतका क्रियाकलाप तथा अभियोग र जेल सजाय लगायतका समाचारका नतिजाहरु देखा पर्दथे । ती तथ्यहरु हल असान्दर्भिक रहेको र त्यसले आफ्नो हालको प्रतिष्ठामा आँच पूराएको भन्दै ती दुई व्यवसायीले गुगल सर्चबाट आफ्नो सम्बन्धी ती नतिजा हटाउन गुगललाई अनुरोध गरेका थिए ।
तर गुगलले त्यो अस्विकार गरेपछि उनीहरु गुगल विरुद्धमा अदालतमा पुगेका थिए । अदालतमा दुई व्यवसायीको हकमा दुइथरी फैसला गरेको छ र अदालतको फैसलाको पालना गरिने गुगलले जनाएको छ ।
गुगलद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ- बिर्सिन पाउने हकको पालना गर्न हामीले कडा मेहेनत गरिरहेका छौँ । तर सार्वजनिक चाँसोका विषयवस्तुहरु गुगल सर्च नतिजाबाट नहटुन् भन्ने कुरामा पनि हामी सचेत छौँ ।
स्पेनका मारियो कोस्टेजा गोन्जालेजको मुद्दाका सन्दर्भमा युरोपेली न्यायालयले सन् २०१४ मा बिर्सिन पाउने हक सम्बन्धी नजिर स्थापित गरेको थियो । ती व्यक्तिले आफ्नो वित्तिय इतिहास सम्बन्धी विवरणका नतिजाहरु ह्टाउन गरेको माग र त्यस सम्बन्धमा युरोपेली न्यायालयको फैसलापछि ग’गलले त्यस सम्बन्धी ८ लाख पेजहरु गुगल सर्चबाट हटाएको थियो ।
शान्ति सुरक्षालाई थप मजबुद बनाउन सीसी क्यामरा
विद्युतीय सवारी साधनका लागि २० वटा चार्जिङ स्टेशन बनाइँदै
भिषण आगलागीबाट अवरुद्ध सुविसुकाे सेवा केही दिनमै पूर्णरुपमा सञ्चालन हुने
सामसुङले सार्वजनिक ग-यो दुई स्मार्टफोन, सुरुवाती मूल्य कति छ ?
सुविसु कार्यालको आगलागी नियन्त्रणमा आयो
‘सामसुङ’ले एकसाथ दुई स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्दै, यस्ता छन् फिचर्स !
मूर्तिमा सुनको जलप लगाएर सुनको मूर्ति भन्दै महँगो मूल्य बेच्ने पक्राउ
access_time 3:04 pm
१७ करोड बैंकको रकम हिनामिना गर्ने पक्राउ
अछामका देवीलाल भारतका १९ प्रान्तसहित नेपालका ६५ जिल्ला घुमेर इलाम आइपुगे
access_time 2:53 pm
दाङ । बुद्धको मूर्तिमा सुनको जलप लगाएर सुनको मूर्ति भन्दै महँगो मूल्य बेच्ने गरेको आरोपमा
घोराही । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले बैंकको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा देव विकास बैंक नारायणपुर
बिनय तिम्सीना, इलाम, ४ भदौं । अछाम जिल्ला चौरपाटी–५ का देवीलाल पाण्डे नेपाल तथा भारतका